Betel Palm (ကွမ်းသီးပင် အခက်အလက်) - Hello Sayarwon
Betel Palm (ကွမ်းသီးပင် အခက်အလက်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Betel Palm (ကွမ်းသီးပင် အခက်အလက်)
ကွမ်းသီးပင်(Betel palm ) အခက်အလက် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Betel palm ကို တရုတ်ပြည်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့ အပူပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ အာဖရိကမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အစေ့ကို ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကွမ်းစားခြင်းဟာ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရှိတတ်တဲ့အကျင့် ဖြစ်ပါတယ်။ 1st century AD မှာ Sanskrit medical writings တွေက ကွမ်းစေ့ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အစွမ်း သတ္တိ ၁၃ မျိုးပါရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရသာပြင်းပြီး ခါးသက်ခြင်း၊ စပ်ခြင်း၊ ချိုခြင်း၊ ငန်ခြင်း စတဲ့ အရသာတွေ ရှိပြီး သူဟာ အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• သန်ကောင် သေစေခြင်း
• မကောင်းသော အနဲ့များ ပျောက်စေခြင်း
• ပါးစပ်ကို လှပစေခြင်း
• စိတ်ထက်သန်မှု ပြင်းပြစေခြင်း
သူဟာ CNS ကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာကြောင့် အနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဆေးရွက်ကြီး (သို့) ကဖင်းဓါတ်တွေနဲ့ သဏ္ဍာန် တူပါတယ်။ Arecoline ဟာ ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အောက်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• အစာခြေမှုကို အားပေးခြင်း
• အစာစားချင်စိတ် ဖြစ်စေခြင်း
ကွမ်းသီးပင်(Betel palm ) ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Betel palm ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Areca ဟာ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်ရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ရှိတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတာကြောင့်
• စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု
• Parasympathetic Nervous System လုပ်ဆောင်မှု
• သိုင်းရွိုက် လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှု တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းသီးပင်((Betel palm )အခက်အလက် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေအကုန် (အထူးသဖြင့် မျက်လုံးတိမ်ကြောင့် သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ၊ Beta blockers၊ Calcium channel blockers၊ Cardiac glycosides၊ Cholinergics၊ Monoamineoxidase inhibitors နဲ့ neurolaptics) ကို စာရင်းပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
အချိန်အကြာကြီး ကွမ်းစားခြင်းဟာ ပါးစပ်မှာ fibrosis နဲ့ ပါးစောင် ကင်ဆာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းဟာ ဆေးရွက်ကြီး (သို့) ကဖင်းလို အစွမ်း ရှိတာကြောင့် မစားခင် အရက်သုံးစွဲနှုန်းကို စမ်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကွမ်းကို သန့်စင်ပြီး ဝါးစားရတဲ့ ကွမ်းစေ့အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ပလုတ်ကျင်းရည်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ကွမ်းရွက်တွေကိုသော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ကွမ်းသီးပင်(Betel palm ) အခက်အလက် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကွမ်းကို ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ၊ ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တွေမှာ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ကွမ်းစေ့နဲ့ အရွက်ဟာ DNA ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တိရိစ္ဆာန်နဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေမှာ ကင်ဆာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ စားသုံးနဲ့ ပမာဏနဲ့ အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ အသံအိုး၊ နဲ့ အစာပြွန်ကင်ဆာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ကွမ်းသီးပင်(Betel palm ) အခက်အလက် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ကွမ်းကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• လှုံ့ဆော်မှုများခြင်း၊ မျက်နှာနီရဲခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ စိတ်ဖေါက်ခြင်း၊ စိတ်ပူခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း။
• ရင်တုန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် မြန်ခြင်း၊ နှေးခြင်း။
• သွားမှာ အနီရောင် အစွန်းထင်ခြင်း၊ oral Leukoplakia၊ oral sub-mucosal fibrosis၊ ပါးစောင်ကင်ဆာနဲ့ အမြင်အာရုံ ဝေဝါးခြင်း။
• ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းအနီသွားခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အူအတွင်း နံရံ ပြောင်းလဲခြင်း။
• ပန်းနာရင်ကျပ် လက္ခဏာများ ပိုဆိုးလာခြင်း။
လူတိုင်းကတော့ ဒီလိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ကြုံတွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထဲမှာ ဖေါ်ပြမထားတဲ့ ဆိုးကျိုးအချို့လည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ကွမ်းသီးပင် (Betel palm ) အခက်အလက် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Betel palm ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Areca မှာ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အချို့ အသားခြောက်စေတဲ့ ဆေးတွေဟာလည်း ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Areca ဟာ အသားခြောက်စေတဲ့ ဆေးတွေရဲ့ အစွမ်းထက်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Procyclidine ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းရှိ ဓါတုပစ္စည်းတွေပေါ်ကို သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ Areca ဟာလည်း ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းရှိ ဓါတုပစ္စည်းတွေပေါ်ကို သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Areca ဟာ Procyclidine ရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ဆန့်ကျင်တာကြောင့် အတူတူသုံးစွဲခြင်းဟာ Procyclidine ရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Areca မှာ ကိုယ်ခန္ဓါပေါ်သက်ရောက်မှု ရှိတဲ့ ဓါတုပစ္စည်း တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဓါတုပစ္စည်းဟာ မျက်စိတိမ်၊ Alzheimer’s disease နဲ့ အခြားရောဂါတွေကို ကုသတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ တူညီပါတယ်။
ကွမ်းသီးပင်(Betel palm ) အခက်အလက် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Betel palm ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကွမ်းသီးပင် (Betel palm ) အခက်အလက် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Betel palm ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရွက်၊ အစေ့၊ ဖျော်ရည်။ ကွမ်းစေ့ကို သူတစ်ခုတည်း ဝါးစားတာ (သို့) ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ ရောစားတာ (သို့) အမှုန့်ကြိတ်စားတာ (သို့) လှီးစားတာ (သို့) Betel vine အရွက်ကို ပတ်ပြီး ထုံးကို ရေနဲ့ ဖေါက်ပြီး စားတာ မျိုးတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတ် 21, 2018
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. page 64.
Betel nut. http://www.drugs.com/npc/betel-nut.html. Assessed date 22/11/2015.
Betel nut. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 995-areca.aspx?activeingredientid=995&activeingredientname=areca. Assessed date 22/11/2015.